Ukubekwa kwamanye amazwe, ukuBekwa bucala, ukuKhowudwa, i-Iceland kunye nokuTolikwa kweWebhusayithi yaseKati yeFoto | Martech Zone
Ukubekwa kwamanye amazwe, ukuBekwa bucala, ukuKhowudwa, i-Iceland kunye nokuTolikwa kweWebhusayithi yaseJapan yeefoto
NgoMvulo, Meyi 7, 2007 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Kukho ulwazi oluninzi phaya xa kufikwa kumba wamazwe aphesheya, ubuchwephesha kunye nokufaka iikhowudi ngaphakathi kwezicelo zewebhu. Kukwakho nokungaqondani okuninzi malunga nento nganye ebonelela ngesicelo sewebhu. Nantsi into endiyithathayo…
Xa umkhangeli wewebhu esenza uqhagamshelo kwiseva yewebhu, idlula kwizinto ezahlukeneyo kwaye yenza izicelo ezongezelelweyo, nanku umzekelo:
-Arhente yoMsebenzisi: Mozilla / 5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; en-US; rv: 1.8.1.3) Gecko / 20070309 Firefox / 2.0.0.3
Yamkela: HTTP Yamkela = isicatshulwa / xml, isicelo / xml, isicelo / xhtml + xml, isicatshulwa / html; q = 0.9, isicatshulwa / icacile; q = 0.8, umfanekiso / png, * / *; q = 0.5
Ulwimi olwamkelekileyo: en-us, en; q = 0.5
Yamkela-Encoding: gzip, deflate
Ihlabathi jikelele liyinxalenye yezinto ezininzi:
Indawo: Ukukwazi ukufumanisa ukuba loluphi ulwimi kunye nendawo apho undwendwe undwendwela khona. Oku kwenziwa ngeZicelo zeHTTP apho undwendwe luchongwe yindawo ethile. Kwimeko yam, yi-en-US. "En" sisiNgesi kwaye “US” yiUnited States. Olu luseto ngaphakathi kweNkqubo yokuSebenza.
Imimandla yexesha: Isakhono sokuhlengahlengisa imimandla yexesha. Oku kuhlala kufezekiswa ngokuseta iseva yakho kwiGreenwich Mean Time (GMT) kwaye uvumele abasebenzisi ukuba basete iseti yabo yasekhaya kwi-GMT.
Ukufakwa kweekhowudi kumanqaku: Esi sisakhono sokubonisa iiseti zomlinganiswa wolwimi ngokufanelekileyo. Kwahlukile kulwakhiwo lwasekhaya kuba ukwenziwa kwendawo kungandixelela ulwimi kunye nommandla wekhompyuter owenza isicelo kuwo, kodwa ayizukundixelela loluphi ulwimi umfundi iyacela… loo nto ixhomekeke kumfundi!
Qaphela kwiNtloko yeHTTP xa isikhangeli sisenza isicelo, sixelele iserver ukuba icela indawo yam (Yamkela-uLwimi: en-us); Nangona kunjalo, ikwafuna ukuxelela iserver ukuba yintoni iseti yohlobo oluceliweyo (Yamkela-Charset: Yamkela-Charset: ISO-8859-1, utf-8; q = 0.7, *; q = 0.7) ISO-8859-1 kunye ne-utf -8 Zombini iiseti zomlinganiswa ezivunyelweyo.
Kweli hlabathi lixubekileyo, ubungqingqwa abusoze bunyanzelise ulwimi. Nangona ndikwi-en-US, ndingafunda ulwimi olwahlukileyo ndisebenzisa iseti yomlinganiswa eyahlukileyo… yile nto yenzekayo xa ndisebenzisa Google Hindi (Andiyisebenzisi ngokwenene i-Hindi Hindi). Isicelo sam sendawo kunye noseto lweempawu ziyafana njengaxa ndicela Google IsiNgesi iphepha, kodwa ndilondliwe ngephepha endingenakulifunda kuba andinaseti yomlinganiswa. Zonke ziyavela ????????????…… Nangona kunjalo, ndingalayisha olo phawu lusetelwe kwiFirefox (IFirefox> Ukukhetha> Okuphambili> Iilwimi):
Ukuba ndiyalayisha olo lwimi, ndingacela iphepha kwiphepha leseti lendalo kwaye ndilibonise kwikhompyuter yam nangona indawo yam engagungqiyo ikwi-US!
Ke… ukuba ndingumfundi waseHindi, ndifunda isiNgesi ePurdue kwaye ndiqhagamshelene nge VPN kwiserver yesikolo, eholideyini eOstreliya… kukho izicwangciso ezi-3 ezahlukeneyo ekufuneka zisetyenzisiwe kwisicelo sokuba sibe se-Internationalised ngokwenene- kwaye nanye zixhomekeke kwelinye.
Indawo yam iya kuza njenge-US, kodwa indawo yam yexesha yi-Australia, kodwa ulwimi endilucelayo kule webhusayithi inokuba sisi-Hindi. Ukuba bendinokucwangcisa isicelo sam sokwenza uqikelelo ngokusekwe kwindawo yekhompyuter yam, bendiya kuba ndiphosakele-ndondla umntu wesiNgesi kwindawo yexesha laseMpuma. Ngokufanelekileyo, ndingasifaka isicelo sam ukuba ndisinike zombini ulwimi kunye noseto lwendawo ... kodwa andizukubacingela ngokusekwe kwindawo.
I-Iceland - owona mzekelo wokugqibela
Asiyazi imingeni yeelwimi ezininzi kunye neendawo ezininzi eUnited States apho sikhona zonke Thetha isiNgesi [sarcasm implied]. Kwamanye amazwe, anjengeIceland, nangona ulwimi lwenkobe luyisi-Icelandic, abantu baseIceland abanomdla bayakhula befunda iilwimi ezi-3! Kuba i-Iceland lilizwe eliphakathi kweYurophu noMntla Melika, iinkampani zabo zisebenza kumazwekazi amaninzi, iilwimi, iilwimi zeelwimi kunye namaxesha ngamaxesha kwi desktop yabo!
Iiwebhusayithi ezininzi ze-Icelandic zakhiwe nge-US English, UK English, Icelandic, Spanish, Spanish, French and German! Khawufane ucinge ukuba kunganzima kangakanani ukwakha Icelandair izicelo zewebhusayithi kunye neenkqubo zethikithi… wow!
UKUQALA: Ndonwabe kakhulu ekusebenzeni nabantu abalungileyo abavela e-Icelandair kwaye ndinokukuxelela ukuba zezinye zezona ngcali zinetalente kwaye zinobuhlobo ndikhe ndonwaba ukusebenza nazo. Lilizwe nje elimangalisayo nabantu! Yiya kutyelela… uthathe i-Icelandair kwaye uqiniseke ukuba undwendwela Blue Lagoon!
Ulwimi xa kuthelekiswa neKhowudi
Kukho iikhowudi ezahlukeneyo zabalinganiswa ngaphakathi kulwimi olunye olungadlali kakuhle omnye komnye! Umzekelo: I-imeyile yaseJapan ebhalwe kwi-Shift-JIS inokunikezela ingafundeki kwikhompyuter yomntu waseJapan enendawo eyenziwe isetelwe kwi-ja-JP kuba iseva yabo yeposi yamkela kuphela i-EUC-JP. Ngokufanelekileyo, umthengi kufuneka abenako ukuseta ukuba yeyiphi ikhowudi ayithandayo kunye nolwimi-ngokuqinisekisa nje ukuba ukufakwa kwikhowudi kunye nolwimi kuyahambelana noko kufunwa ngumthengi.
Ukuba ndinqwenela ukufunda isiJapan, kungafuneka ndikhethe zombini iJapan njengolwimi lwam KANYE neShift-JIS yokufaka ikhowudi ukubonisa olo lwimi ngokufanelekileyo. Nalu udideko olungakumbi ukongeza kumxube ... UNICODE / UTF8 ixhasa uninzi. Ukubuyela umva kuyinyani ngokunjalo. Ezinye iilwimi zinokufundwa kwiindidi ezininzi zekhowudi. Ukuba ayivakali… ndiyaxolisa, ngumba onzima kakhulu.
Ngenye imini ndiyakholelwa (ndiyathemba) konke oku kuyakutshintsha. Ndicinga ukuba abayili bokuqala beekhowudi zalapha ekhaya banethemba lokuba indibaniselwano yelizwe-yelizwe iya kuba yiyo yonke into efunekayo… kodwa siye saphuke kakhulu. Khumbula, okuninzi koku kwaphuhliswa ngaphambi kokubakho kwe-Intanethi. Ngokufika kwe GIS, mhlawumbi umntu unokukhetha i-encoding yakhe kwaye i-GIS iya kuphatha ixesha lendawo kunye nolwazi lwendawo.
Buyela kwinkxaso yelizwe jikelele. Ukuba ufuna ukubonelela ngesicelo seLinye ilizwe, kufuneka:
Xhasa iintlobo ezininzi zokufaka iikhowudi, iilwimi, kunye neefayile zokuguqulela ukubonisa ezo nguqulelo.
Vumela umthengi ukuba asete ulwimi lwabo, kwaye mhlawumbi nohlobo lweekhowudi, ukuba kukho imfuneko.
Imida yexesha lenkxaso ngokuvumela abasebenzisi ukuba babhekise ixesha labo ngokuthelekisa iGMT.
Sebenzisa iikhowudi zalapha ekhaya ngononophelo… ABAYIBONISI ngokuchanekileyo into efunwa ngumsebenzisi okanye abanokuyifunda.
Ukuguqulelwa koomatshini kusaqala. Kukho iiwebhusayithi ezininzi phaya (kwaye WordPress pluginsezibonelela ngoguqulelo lomatshini kwindawo yakho. Sukuhendeka ukuba wenze oku… kukho izizathu ezibini zokuba:
Ukuba uguqulelo lomatshini luyasebenza, umsebenzisi ojonga indawo yakho uya kuba nomguquli asebenza naye.
Ukuguqulelwa koomatshini kuyasondela.
Awundikholelwa? Nantsi inguqulelo yesiJapan yakho:
Ncamathisela ukusuka Ifayile yeMasatsu - i-dude enetoni yemifanekiso yeekati:
Ungeniso lweBlog yaseJapan
?? Hayi ?????
Igama lengcwele yenqindi ye / indlovu ebonakale izolo “a / irhamncwa ngenqindi? umlindi "" ?? Hann ???? ” kunye / nomdlali werediyo Yutaka Mizushima….
? (?) eyenza i-cuttlefish ngokulula.
Kuba nkqu nomdlali werediyo yengcwele yamanqindi, inkosi ????? yekati / ikati ngamaQuince amaTshayina eNagai Ichiro = ibhola yedragoni abasebenzi be / Umhleli ujongeka ngathi abantu abanobuqili bayazi ngokulula.
?????? (ukubila) bendilibele kwaphela kulo nyaka "imfihlelo yegama leemoto ezinkulu", zesiqhelo minyaka le?
Ukuba ndibhala ndiphumelele kulo nyaka,
??????? ingcwele ??? (njani?)? Intloko yecullion (isike hayi) iFukami ?? (? okanye uqaphele ukwazi?) i / yiyo eyenzayo
?????? Nge, iba ngu "can / / /?", Ngamanye amagama, "kung fu", xa umgca ufike kwaye utshintshe intloko ye / igama.
?????? Nangona kusithiwa yonyusa isibini esongeziweyo kusenokwenzeka ukuba ingaba loluphi igama.
Inyaniso kuthiwa "yobudala" kuba isimboli yesilivere ngu-Ag?, Nangona igama le "???? isilivere ”kwiTakaoka? Ingcali ye ??????? Ngaba ucinga ukuba umlinganiswa obizwa ngokuba ngu "?" yayisetyenziswa kunye nombutho wefilimu yesilivere? ukuba iyibiza kunye nelungu elongezayo.
?????? Nangona kunjalo, ndicinga ngokuzingca, ukuba ithiyori yam ayidibani naloo "?" Ifakiwe kwi / uphawu lweTshayina.
Ndiqinisekile ukubuyisela umva kule nguqulelo kuya kubonelela njengesichazi kwisiNgesi. Uwuqondile ungeniso, akunjalo?
tags: udidi lwekhowudiiicelandairkumazwe ngamazwezendawokwasekhayaimimandla yexeshatranslation
Meyi 7, 2007 kwi-11: 04 PM
Ngokuqinisekileyo-umdlali werediyo owayebila wayezibuza indlela echanekileyo yokuthetha izinto ezithile….
Meyi 8, 2007 kwi-6: 44 AM
Ngokuqinisekileyo ndenze njalo! Enkosi, Christine!